Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles Waxay Ku Lumisay Horjooge Dalxiis Myriam St.Ange
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Wararka Seychelles • Dalxiiska
Myriam St.Ange ayaa si murugo leh u geeriyootay Sabtidii, Sebtember 18, 2021, afar maalmood kadib dhalashadeedii 74aad ee jasiiradda La Digue.
Qoyska St.Ange waxay ku kulmeen dalxiiska La Digue labadii maalmood ee la soo dhaafay si ay ugu xigaan walaashood.
Waxay dhimatay iyada oo ay ku hareereysan yihiin wiilasheeda, walaalaheed, iyo qoysaskooda oo ahaa sagootin qiiro leh.
Myriam iyo labadeeda wiil waxay gurigii qoyska La Digue St.Ange u beddeleen hoteelka qoyska Chateau St.Cloud.
Myriam St.Ange iyo labadeeda wiil Carl iyo Sydney Mills waxay u beddeleen guriga qoyska La Digue Island St.Ange, Chateau St.Cloud ee Seychelles, huteel qoys markii ay sii haysteen astaamihii xilligii gumaysiga ee dhismaha astaanta u ahaa.
Myriam iyo wiilasheeduba waxay wadeen qaliin lagu guulaystay iyada oo sii wadata inay ka ciyaarto dhibic u ah horumarinta dalxiiska jasiiradaha.
Qoyska St.Ange ayaa isugu yimid dalxiiska La Diguea labadii maalmood ee ugu dambaysay inay ku xigto walaashood, waxayna dhimatay iyada oo ay hareereeyeen wiilasheedii, walaalaheed, iyo qoysaskoodii oo ahaa sagootin qiiro leh.
Myriam St.Ange waa walaashii Alain St.Ange, Wasiirkii hore ee Dalxiiska, Duulista Hawada, Dekedaha iyo Badda Seychelles, iyo qaar badan oo ka mid ah xubnaha qoyskeeda ayaa maanta ah ciyaartoy dalxiis ku guuleystay Seychelles.